စားသောက်ပွဲတွေမှာ.. ဇွန်းနဲ.ခက်ရင်းအမှတ်အသားပြုထားခြင်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Admin က Kitchen ( Production ) ကိုပဲ..တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာခဲ့သူပါ။
Kitchen နဲ. Service( Waiter & Waitress ) ဆိုတာကလည်းအမြဲလက်တွဲ
ဥပမာ စားသောက်နေရင်း...ဖုန်းထပြောမိတာတို. ၊အခြားတစ်နေရာကိုထသွားမိတာ
လက်ကိုင်တွေကို အောက်ဖက်မှာခွဲထားခဲ့မယ်ဆိုရင်..စားနေတုန်း ၊ မပြီးသေးဘူး..
(၂) ပန်းကန်ပြားပေါ်မှာ ဇွန်းနဲ.ခက်ရင်းကို အပေါင်းလက္ခဏာ လုပ်ပြထားတယ်ဆိုရင်တော့..ဒုတိယမြောက်ပာင်းပွဲကိုစားတော့မယ်၊ ယူလာပေးလို.ရပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်...။
(၃) ပန်းကန်ပြားပေါ်မှာ ဇွန်းနဲ.ခက်ရင်းကိုကန်.လန်.ဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်..
(၄ ) ပန်းကန်ပြားပေါ်မှာဇွန်းနဲ.ခက်ရင်းကိုမျက်နှာမူရာအရပ်သို.အလျားလိုက်အ
European တွေ Lunch (သို. ) Dinner အတွက်..ပန်းကန် ၊ဖန်ခွက် ၊
ဇွန်း ၊ခက်ရင်း၊ ဓါးတွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြသလဲ..
ပာင်းချက်နည်းများ FB မှကူးကူပါသည်။